Iza amin'ireo tolotra mailaka amin'ny mailaka no tsara indrindra amin'ny blôginao؟
Na inona na inona antony misy anao manomboka blôgy، ny famakiana mpamaky hamaky lahatsoratra dia dingana voalohany. Amin’ny alalan’ny fampivoarana ny fifandraisanao amin’ny mpamaky anao ihany no hahafahanao manatratra ny tanjonao.
Ary ny gazetiboky mailaka dia fitaovana manan-danja ho an’ny fampivoarana ireo fifandraisana ireo. Ny fampahalalam-baovao sosialy dia mahasoa، fa mbola misy zavatra tena miavaka mikasika ny mailaka: resaka fifampiresahana manokana iray، ankoatra ny vaovao dia ny (mbola) Ny làlana تجنب indrindra ahafaany mivadika.
Azonao ny hoe "مانينونا" ao ambadiky ny fampahalalam-baovao mailaka – fa ahoana ny amin’ny "أهوانا"? Serivisy mailaka mailaka izay hanampy anao hahatratra ny tanjonao bilaogy?
1.1 1- الاتصال المستمر
1.2.1 دلائل الميزات
1.3.1 دلائل الميزات
1.4 4- أوبر
1.4.1 دلائل الميزات
1.5.1 دلائل الميزات
1.5.4 GetResponse لا tsara indrindra:
1.6.1 دلائل الميزات
1.7.1 دلائل الميزات
الاتصال المستمر dia mpanolotra mailaka mailaka ho an’ny orinasa madinika sy tsy miankina.
Niorina tao amin’ny 90s، ny Constant Contact dia efa nisy fotoana vitsivitsy. Fantatra amin’ny fanohanan’ny mpanjifa azy manokana، izy ireo dia mifantoka amin’ny fanomezana tolotra mailaka an-tserasera ho an’ny orinasa madinika madinika sy tsy ara-barotra.
Hamantatra bebe kokoa – Constant Contact Review
Handfa hafatra an-jatony
Fanadihadihana amin’ny vanim-potoana marina
Mamorona sy manara-maso ireo tapakila eCommerce
الاتصال المستمر dia manohana amin’ny alàlan’ny finday
Ny orinasa madinika sy ny tsy miankina no tena mpihaino azy ireo. Raha toa ianao ka tsy te-tezaina amin’ny teknolojia ary ny fanampiana an-tariby dia laharam-pahamehana ho anao، dia mety ho safidy tsara ny Contact Contact.
Nanomboka tany 2001، ny MailChimp dia iray amin’ireo mpanome tolotra mailaka lehibe indrindra eny an-tsena.
Mbola betsaka kokoa ny MailChimp noho ny mascot، Freddy. Izy ireo dia iray amin’ireo mpamatsy mailaka malaza indrindra amin’ny alàlan’ny mailaka. MailChimp dia fantatra amin’ny fampiasany mora، fampifanarahana amin’ny بديهي، آري ني إندري دالو ليبه.
Fampidiran-dàlana e-commerce (Magento، WooCommerce، 3dcart، sns).
Fampidirana fanazavana sy fampidirana Google Analytics
Fijerena ny endri-tsoratry ny mailaka amin’ny sehatra samihafa
Olona maro tsara tarehy، mora ampiasaina
مرنة ، mora ampiasaina amin’ny mpampiasa mailaka sy rindrambaiko maimaim-poana – mampifanaraka ny zava-drehetra (font، loko، habe، sns) nefa tsy mahalala code
Ny endrika fanoratana dia voafetra ary sarotra ny manamboatra raha tsy mahafantatra HTML / CSS ianao
Ireo سينجا تجزئة sy أتمتة dia fototra
Tsy ميسي تيليفونا
Ny Ecommerce dia ny mpihaino tariby voalohany amin’ny MailChimp، ary io no tena izy mamirapiratra. Raha mivarotra vokatra ara-batana an-tserasera ianao dia natao ho anao ny MailChimp. MailChimp dia mahafinaritra ihany koa ho an’ireo mpitoraka blaogy mandefa mailaka an-tserasera na fampielezan-tserasera RSS ho an’ny lisitra kely (malalaka ho an’ny mpanjifa 2000!). MailChimp no tsara indrindra amin’ny fampielezan-kevitra RSS.
Sendinblue dia fitaovam-barotra izay manome hery ny SMB mba hifandray sy hitombo amin’ny sehatra iray amin’ny mailaka، SMS، marketing automatique، CRM، chat ary ny maro hafa.
بديهية السحب سي إسقاط البريد الإلكتروني mpanonta
Ny fizarana mavitrika sy ny marketing automatique ho amin’ny tanjona dia mitarika ny fidirana mailaka mifototra، hetsika an-toerana، sns
الرسائل القصيرة التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة
Fanadihadiana tena misy amin’ny alàlan’ny sarintany tsindrio، fampidirana GA
الاشتراك في Fomba
Fampidirana miaraka amin’ireo fitaovana mpamokatra، CMS ary sehatra e-varotra
Na vao manomboka ianao na efa zatra amin’ny marketing mailaka، raha mitady rindrambaiko matanjaka، fanohanana hentitra ary manana lanja tsara tokoa amin’ny vola، jereo ny Sendinblue.
AWber no iray amin’ireo mpandraharaha malaza amin’ny alàlan’ny mailaka sy mahazatra.
Voatendry ao amin’ny 1998، AWeber dia iray amin’ireo mpikarakara ny mailaka malaza indrindra amin’ny mailaka. Fantatr’izy ireo amin’ny endri-javatra matanjaka، manolotra fitsarana maimaim-poana izy ireo ary antoka antoka.
Tatitra fohy sy fanadihadiana lalina ؛ Tsara ho an’ny orinasa mila mitandrina ny mpikambana ao amin’ny ekipa tsirairay ao amin’io pejy io
مرنة: Fifandanjana tsara eo amin’ny fampiasana mora ampiasaina، ary ny fahaiza-mandroso
خدمة جيدة amin’ny alàlan’ny finday ، الدردشة الحية ، na mailaka
Ahitana ny fidirana amin’ny tranomboky sary an’arivony
Ny تجزئة ضياء ampiharina tsy ميسي أنطوني. Ireo mpandray anjara dia isaina imbetsaka raha misy lisitra maromaro – izay afaka mitondra ny vidin’ny vidiny.
نيويورك تجزئة ضياء فوتوترا. Tsy afaka mampisaraka mivantana ireo mpizara mifototra amin’ny zavatra ataon’izy ireo ianao.
Ny mpamoaka mailaka dia malaza ho tsy tia namana.
Ny AWeber dia mifantoka bebe kokoa amin’ny orinasa na mpandraharaha amin’ny mailaka noho ny olona. Marina tokoa، AWeber dia manome fepetra tsara، saingy raha mpitoraka blaogy ianao dia tsy misy na inona na inona tsy azonao atao ao amin’ny sehatra tsara kokoa ho an’ny vidiny mitovy na mora kokoa.
GetResponse dia nampiasaina ho fitaovana safidy ato amin’ny WHSR nandritra ireo taona 2 lasa. Azonao jerena i Jerry مراجعة GetResponse Eto.)
Fanamafisana: Manentana mailaka manokana amin’ny klioketsa، ny fifanakalozana، ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana، sns.
Tontalin’ny mari-pandefetana fanoratana، anisan’izany ny lisitry ny pop-ups amin’ny endriny، ny horonan-taratasy، ny horonan-tsary، sns.
Fanamboarana tranokala، anisan’izany ny fanasana sy ny fampahatsiahivana ny template
Fametrahana rafitra lehibe iray manontolo hanamboarana ny lisitry ny mailaka، anisan’izany ny pejy fananganana sy ny karazana karazana safidy rehetra
Vitsy ihany ny sora-baventy، ary kely dia kely ny mpampiasa ary sarotra ny mampiasa
GetResponse لا tsara indrindra:
Ireo mpivarotra digitale، indrindra fa ireo mpivarotra mailaka، izay mila asa mahomby، dia mety hahita izay rehetra ilainy miaraka amin’ny GetResponse. Raha te-handamina ny zava-drehetra amin’ny toerana iray ianao (pejy tranonkala، tranonkala، analytics، sns.) Dia andramo ny fitsarana maimaim-poana mba hijerena raha mety aminao ny GetResponse.
ConvertKit dia manolotra mailaka mailaka ho an’ny mpamaham-bolongana projet miaraka amin’ny Segment sy autom automisation.
Noforonina tao amin’ny 2013، ConvertKit ilay zaza vaovao ao amin’ny tranokala، saingy efa nahatonga azy ireo tetezana lava be izany ary mbola mitombo haingana. Ny mpamorona dia mpitoraka bilaogy matihanina izay mamorona sy mivarotra ny vokany manokana ihany koa، ary namorona ny ConvertKit ho an’ny mpanatrika. Izany dia natao hanampiana ireo mpitoraka bilaogy hitantana ny lisitry ny mailaka sy ny fampielezan-kevitra mba hampitomboana ny varotra rehefa manomboka vokatra na serivisy.
Rehefa nanontany vondrona mpandraharaha amin’ny aterineto aho izay mpandefa rindrambaiko mailaka an-tserasera، dia maro no naneso azy ireo tamin’ny fanohanany an’i ConvertKit:
Mivadika ROCKS raha toa ka manana dindo maro mihazakazaka ianao na manana fomba maro ahafahan’ny olona miditra ao amin’ny lisitry ny mailaka. Ny fampiasana ny trig sy ny teboka amin’ny fifandimbiasana dia mahatonga azy ho mora tokoa ny manampy ny mpanjifanao hivezivezy amin’ny alàlan’ny mpanjifany tsy misy fahadisoana amin’ny mpanjifa mahazo mailaka izay nata aata. ماريسا ستون تتجنب أي سيمون ديا ميتيني سوسيالي.
ماريسا ستون تتجنب أي سيمون ديا ميتيني سوسيالي.
Niaraka tamin’i MailChimp nandritra ny fotoana lava indrindra aho – raiben’ny dadabe tao، koa manana automation maimaim-poana sns .. tsara izany mandra-pahazoako nampiasaina. Betsaka ny olana ahazoako ny olona ao amin’ny lisitra mety، olana miato na manomboka fanaterana olona، ary raha mila mifindra olona avy amin’ny lisitra iray aho na hanampy olona hitondrany ahy mandrakizay. Tsapako fa mandany adiny iray alina eo ho eo aho isaky ny andro vitsivitsy mba hahazoana antoka fotsiny fa mandeha ny asa. Nifindra tany Convertkit aho ary tena tiako. Naharitra minitra 15 aho mba namerina namorona ny andiany mailaka 30 andro ary ny fanafarana ny lisitry ny lisitra dia mora ary maimaim-poana ny fampisehoana. Faly be noho ny fandoavam-bola amin’ny zavatra atokisako tsara – tsara izany raha mahalala hoe mandeha fotsiny izy. هيلين سترينجفيلو avy amin’ny Studio Design Studio
هيلين سترينجفيلو avy amin’ny Studio Design Studio
Manam-pahefana misimisy amin’ny triggers sy ny fihetsiketsehana hotsidihina
الجزء آري ماندامينا mpizara miaraka amin’ny marika
Ny Analytics ، anisan’izany ny tahan’ny fiovam-po amin’ny endrika fisafidianana
Mora ny mandamina na dia lisitra be dia be sy sarotra aza
Foto-kevitra noforonina sy tranonkala fitsangatsanganana
Tena voafetra ny tonian’ny mailaka: tsy afaka mampiasa ny endri-tsoratra / loko / habe ianao amin’ny البريد الإلكتروني raha tsy mampiasa code
ConvertKit dia natao manokana ho an’ny mpitoraka blaogy sy ny mpizara dizitaly izay te-hivarotra ny vokatra sy ny serivany manokana. Raha te hanatontosa mailaka mailaka ianao، mametraka loharano sarotra na sehatra fanangonana، sns.، Dia ConvertKit dia ho anao.
Rehefa tonga ny fotoana hahazoanao mari-pahaizana an-tsoratry ny mailaka mailaka mankany amin’ny automatique marketing omnichannel dia eo i Omnisend mba hanomezana hery an’ireo mpivarotra eCommerce. Ny mpanoratra sy ny mpanao hatsikana taloha، Omnisend dia nanamboatra toerana azo antoka tao amin’ny indostrian’ny eCommerce marketing market tamin’ny alàlan’ny fanaovana mailaka mailaka dakaana dokana kokoa hanolorana ny fifandraisra manoMana.
Fizarana Smart ho an’ny fikendrena hipetaka
Fitaovana fitaovam-pifandraisana tafiditra ao anatin’izany ny pop-up، endrika statik، pejy fitaterana ary endrika misy ny Wheel of Fortune
Fahafahana manampy fantsona marobe amin’ny alàlan’ny fidirana automation mitovy
Mikendry mifototra amin’ny fihetsika miantsena، firotsahana amin’ny fampielezankevitra ary angon-drakitra mombamomba
Ento eo ambanin’ny tafo ny fantsonao: Facebook Messenger و mailaka و SMS و fampilazana notarihin’ny tranonkala و WhatsApp و Viber و sns
Tsy ميسي fampiharana finday
Tempola somafetra الجسدية
Ity sehatra ity dia ho an’ny rehetra izay mivarotra an-tserasera ary mila manorina fifandraisana tsara kokoa amin’ny mpanjifany. Raha toa ka fotoana tokony hanisa avy amin’ny takelaka tsotra mankany amin’ny automation marketing omnichannel، Omnisend no safidy tsara indrindra ho anao.
Efa manomboka ny fanombohana ny taratasinao mailaka ve ianao satria tsy azonao antoka hoe iza iza no mpanome tolotra؟ Ireo mpikarakara rehetra ireo dia tsara، ary maro amin’izy ireo no manome fitsarana maimaim-poana na na dia ny asa fanompoana maimaim-poana aza.
Nə anona antony misy anao manomboka blong, ny famakiana mpamaky hamaky lahatsoratra dia dingana